5 Tilmaamood Oo Ku Saabsan La Dhaqanka Warbaahinta Sida Ilo Khabiir Ah | Martech Zone
Weriyeyaasha TV-ga iyo daabacaadda ayaa wareysanaya khubaro ku saabsan nooc kasta oo mowduucyo ah, laga bilaabo sida loo qaabeeyo xafiis guri illaa hababka ugu wanaagsan ee lagu badbaadin karo howlgabnimada. Khabiir ku ah goobtaada, waxaa lagugu yeeri karaa inaad kaqeybqaado qeybta baahinta ama daabacaadda maqaalka, taas oo noqon karta hab weyn oo lagu dhiso astaantaada lana wadaago fariin togan oo ku saabsan shirkaddaada. Halkan waxaa ah shan talo oo lagu hubinayo khibrad warbaahineed oo togan, waxsoo saar leh.
Markay Warbaahinta Wacdo, Kajawaab
Haddii aad fursad u leedahay in lagaa wareysto TV ama daabac, iska daa wax kasta oo aad qabanaysid. Ka fulin ahaan, mid ka mid ah doorarkaaga ugu muhiimsan ayaa ah inaad hubiso in shirkaddaadu hesho saxaafadda saxda ah. Xubnaha warbaahinta waxay si fudud ugu yeeri karaan mid ka mid ah tartamayaashaada, marka markay doortaan inay ku soo wacaan, ka faa'iideyso fursadda aad ku heli karto magaca shirkaddaada iyo farriintaada halkaas.
Ka jawaab waqtiga ku habboon oo naftaada diyaar u noqo. Haddii aad tahay wadashaqeyn oo la heli karo, waxay noqon kartaa bilowga xiriir dheer oo waxtar leh. Sii wariyaha lambarka taleefankaaga gacanta una sheeg inuu kula soo xiriiri karo waqti kasta.
Qorshee waxaad rabto inaad dhahdo iyo sidaad udhahdo
Yeelo qorshe guud oo ah waxa aad rabto inaad kaga gudubto wareysi kasta oo warbaahineed. Weriyuhu wuxuu leeyahay ajende u gaar ah: Waxay dooneysaa inay u soo bandhigto dhagaystayaasheeda maqaal xiisa badan oo xambaarsan macluumaad Laakiin sidoo kale waxaad leedahay ajende: inaad ku gudbiso farriin togan oo ku saabsan shirkaddaada. Waxaad dooneysaa inaad ka jawaabto su'aalaha weriyaha, laakiin ogow sida wax loo dhigo.
Waxaad dhahdaa weriye wuxuu sameynayaa qeyb TV-ga ah oo ku saabsan fayo qabka eyga, tilmaamo waxtar leh oo ku saabsan sida dadku u hubin karaan in eeygu caafimaad qabo. Waxaa laga yaabaa inay wareysi siiso talooyinka eyda. Bixiyuhu wuxuu la wadaagi karaa khibradiisa ku saabsan ilaalinta eeyaha caafimaad, isagoo waliba la wadaagaya inuu ahaa soosaara guuleystey muddo 25 sano ah iyo inuu gelinayo jacayl badan iyo dadaal badan soo saarista eeyo caafimaad qaba oo faraxsan.
Ogow waxaad ogtahay, iyo waxaad aadan aqoon
Maadaama aad tahay agaasimaha guud ee shirkadaada, waa inaad sameysaa wareysiyada warbaahinta badankood. Waxaad sifiican uga fahmaysaa sawirkaaga weyn shirkadaada qofkasta, waxaadna tahay wajiga ururka. Laakiin mararka qaarkood waxa jira dad ka tirsan ururkaaga oo aqoon gaar ah u leh maaddo gaar ah. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in kastoo laga yaabo inaad khabiir ku tahay waxyaabo badan, aadan khabiir ku ahayn wax walba.
U sheeg shirkaddaada inay suuq geyso nafaqeynta iyo fiitamiinnada. Waxaa laga yaabaa inaad taqaano mid ka mid ah alaabtaada kuwa aadka loo amaanay iyo kuwa ugu weyn ee iibiya, laakiin waxaa laga yaabaa inaadan aqoon sayniska saxda ah ee ka dambeeya shey kasta. Markaa haddii waraysigu ku saabsan yahay sida kaabis gaar ahi u shaqeyso, waxaa ugu wanaagsan in la taabto khabiirka cilmiga leh ee ka shaqeeya khadka wax soo saarka si uu u sameeyo wareysiga Aqoonso dad kala duwan oo leh khibrado kala duwan oo ku jira ururkaaga, una sii diyaari si ay ula hadlaan warbaahinta.
Qoraalka la xiriira, haddii weriyuhu ku weydiiyo su'aal aadan jawaabteeda aqoon, waxaad u malayn kartaa inay tahay ceebtii ugu dambaysay. Laakiin ha ka welwelin: Wax khalad ah kuma jiraan inaad ku dhahdo wariyaha:
Taasi waa su'aal wanaagsan, waxaana rabaa inaan sameeyo baaritaan si aan jawaab fiican kuugu helo. Goor dambe ma kula soo laaban karaa maanta?
Wax faallo ah kama bixin
Jawaabna ha moodin. Markaad ku soo noqotana wariyaha, hubi inaad jawaabta ku dhigto ereyadaada. Tusaale ahaan, ha jarin oo ku dhajin ereyga maqaal wargeys ama degel oo ha ugu dirin weriyaha. Su'aal kasta oo la weydiiyo waa in looga jawaabaa aqoontaada - xitaa haddii ay tahay inaad sameyso cilmi baaris si aad u hesho aqoontaas.
Had iyo jeer ula dhaqan wariyeyaasha si xushmad leh. Aqoonso magaca weriyaha, ha ahaato TV, taleefan ama wareysi websaydh.
Noqo edeb iyo wanaag. Waxaad dhahdaa waxyaabo ay ka mid yihiin "Taasi waa su'aal wanaagsan" iyo "Waad ku mahadsan tahay inaad iga mid noqotid."
Xitaa haddii aad u maleyneyso in su'aashu tahay wax lagu qoslo, ha ka dhigin inuu weriyuhu dareemo doqon. Ha odhan, “Maxaad sidaas ii weydiisay?” Ma garanaysid sida uu weriyuhu awoodi doono inuu jawaabahaaga u qaato oo uu macluumaadka ugu dhex daro sheeko.
Ha ka hor imaan wariyaha, gaar ahaan marka aad hawada ku jirto. Maskaxda ku hay in haddii aad tahay qof xun oo wax qarin kara, sheekadu waxay la imaan doontaa dhawaaq diidmo ah.
Haddiise aad hoos ula hadasho weriye, waxay eegi doontaa meel kale marka xigta ee ay u baahan tahay khabiir ku takhasusay arrimahaaga.
Haddii kamara lagu wareysanayo, xoogaa fikir ah muuqaalkaaga. Mudanayaal, haddaad suud xidhan tahay, jaakadda badhanka; waxay umuuqataa mid xirfad badan. Beddelka suudhka, shaati golf oo leh astaanta shirkaddaadu waa ikhtiyaar aad u fiican. Dhoolo cadee markaad hadlaysid hana ka gaabin.
Dabcan, wareysiyo badan maanta ayaa laga yeelayaa Zoom ama tiknoolajiyad la mid ah. Hubso inaad u labisato si xirfadaysan (ugu yaraan laga bilaabo dhexda ilaa dhexda), oo fiiro gaar ah u yeelo nalka iyo asalkaaga. Halkii laga heli lahaa khalkhal aan nidaamsaneyn, farxad, jawi hagaagsan - laga yaabee astaanta shirkaddaada oo si muuqata loo soo bandhigay - ayaa kaa caawin doonta inaad adiga iyo shirkaddaada u muujiso iftiin wanaagsan.
Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan la dhaqanka warbaahinta, nala soo socodsii. Maaddaama ay tahay shirkad suuq geyn adeeg buuxa ah iyo xiriirka bulshada, Shaqooyinka Suuqgeynta waxay bixisaa tababarka warbaahinta oo ay weheliso adeegyo kale oo badan.
Tags: ilo khabiirwareysiga warbaahintawareysiyada khadka tooska ah-saxaafadeedwareysiga xiriirka dadweynahazoom